खानेपानीको समस्या समाधान गर्न प्रतिवद्ध छौ – अध्यक्ष शाह | माण्डवी एफएम
खानेपानीको समस्या समाधान गर्न प्रतिवद्ध छौ – अध्यक्ष शाह
प्रकाशित मिति : २०७६ भाद्र ७, शनिबार ०८:४६
प्यूठानका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये जिल्लाको दक्षिण पूर्वमा ऐरावती गाउँपालिका पर्दछ । जिल्लाकै प्रमुख तिर्थस्थलमध्येमा पर्ने ऐरावतीको नामबाट यस गाउँपालिकाको नाम रहन गएको छ । विगत दुई वर्षदेखि यस गाउँपालिकाको प्रमुखको कार्यभार सम्हाल्नुभएका नबिल विक्रम शाहसँग हामीले गाउँपालिकाको समग्र विकास निर्माणको बारेमा बिस्तृत कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ कुराकानीको सार संक्षेप ।
भर्खर मात्रै असारको ३० गते हाम्रो छैटौ गाउँसभा सम्पन्न ग¥यौं । बजेट कार्यान्वयनतर्फ लागिरहेका छौं ।
यहाँको जन्म कहिले र कुन स्थानमा भएको थियो ?
मेरो जन्म २०२८ साल असार २४ गते प्यूठानको ऐरावती गाउँपालिका वडा नं. ५ पकला भन्ने स्थानमा भएको थियो ।
यहाँको राजनीतिक जीवन कहिलेदेखि शुरु भयो र यहाँ राजनीतिमा के बाट प्रभावित हुनुभयो ?
म आप्mनो अध्ययनको दौरानमा ८ कक्षा सम्म प्यूठान जिल्लाकै विभिन्न प्राथमिक विद्यालय हुँदै माध्यमिक विद्यालय जनता मावि मा ८ कक्षा सम्म अध्ययन गरे । त्यसपछि म भारत गएर दिल्लीमा पोष्ट ग्रयाजुशन त्यतै गरे । त्यताबाट आइसकेपछि मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि नै नेपाली कांग्रेससँग आवद्ध भएकोले त्यसैमा सँगसँगै हिडे ।
यहाँ गाउँपालिकाको प्रमुख हुनुभन्दा अगाडि केही राजनीतिक पदहरुमा पनि हुनुहुन्थ्यो ?
त्यो भन्दा पहिले म नेपाली कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए । १३ औं महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि थिए ।
यहाँलाई राजनीतिमा के कुराले आकर्षित ग¥यो ?
मैले अध्ययनकै क्रममा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका सिद्धान्तहरुको विषयमा अध्ययन गर्दै गए र ती सिद्धान्तहरु मलाई मन प¥यो । ती सिद्धान्तहरु ठिक रहेछन् । ति सिद्धान्तहरुबाट जनताको सेवा गर्न स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र हुनपर्नेरहिछ भन्ने लाग्यो । त्यसपश्चात् मैले कांग्रेस पार्टीमा आवद्ध भएर सक्रिय रुपमा लाग्न शुरु गरे ।
अहिले यहाँ अत्यन्तै महत्वपूर्ण स्थानमा हुनुहुन्छ । गाउँपालिका भनेको स्थानीय सरकार हो जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सम्वन्ध स्थानीय सरकारको हुन्छ । यहाँले बीपीको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउनुभएको छ ?
गाउँपालिकामा जब चुनाव जितेर हामी गाउँपालिकाको पदभार ग्रहण गरेपश्चात् हामीले हाम्रो गाउँका विभिन्न आवश्यकताहरु पूरा गर्नुपर्ने देख्यौ । जस्तो स्वास्थ्यको पहुँच सर्वसाधारणको एकदम कमजोर थियो । हामीले जिरो होम डेलिभरी, नो होम डेलिभरीको कुरा मात्र गर्ने गरिरहेका छैनौं कम्तिमा एउटा सिटामोल खानलाई ७÷८ घण्टा पैदल हिडेर आउनुपर्ने बाध्यता थियो यहाँका जनताहरुलाई । त्यो चिजलाई कम गर्न सकियोस् भनेर सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको अवधारणा लिएर हामीले ३ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरु हामीले स्थापना गरिसकेका छौ ।
कुन कुन स्थानमा ?
ऐरावती १ नं. वार्डको माझिदमार, ऐरावती २ नं. वार्डको माक्र्सधमिरे, वार्ड नं. ३ को कोलवाङ्ग भन्ने ठाउँमा । माझीदमारका जनताहरु एउटा सिटामोल खानको लागि ६ घण्टा पैदल हिडेर अमिलेमा आउनुपर्दथ्यो । २ नं. वार्डका जनताहरु माडिखोलाबाट झिमु्रकखोलामा आउनुपर्दथ्यो । त्यस्तो अवस्था थियो । अहिले कम्तीमा पनि उहाँहरुले आधा एक घण्टाको दुरीमा ती सुविधाहरु पाइरहनुभएको छ । त्यस्तै गरेर किसानले कृषि गर्न पाउनुपर्दछ । कृषिको आधुनिकीकरणमा प्रवेश गर्नुपर्दछ । जग्गाहरु कम भइरहेको अवस्थामा कम कम भन्दा जमिनमा धेरै भन्दा धेरै उत्पादन कसरी गर्ने ? त्यसमा सिफारिस अनुसारको मल, बिऊ हामीेले प्रयोग गर्ने, अनावश्यक रसायनिक मल प्रयोग नगर्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले कृषकहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरु गरिराखेका छौं । उहाँहरुलाई सपोर्टेड कार्यक्रमहरु हामीले अनुदानका कार्यक्रमहरु पनि गरिराखेका छौं ।
अब यो जुन स्वास्थ्य र शिक्षामा यहाँले धेरै काम गरेको बताउनुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले पनि धेरै समस्याहरु देखिन्छ । जस्तो गाउँपालिकाको नजिकमा अस्पताल छैन । स्वास्थ्य संस्थामा विरामी लैजानको लागि समस्या छ । यसतर्फ गाउँपालिकाले के योजना बनाइरहेको छ ?
हामीले एउटा नयाँ अवधारणा के ल्याएका छौ भने । आ.व. ०७४÷०७५ कै योजनामा हामीले कम्तिमा पनि ८० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई उहाँको सूचनाको आधारमा घरमै गएर औषधि उपचार गर्ने गरिराखेका छौं । अहिले सम्म गाउँपालिकाबाट करिव ४५० जना ८० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरुलाई घरमै गएर उपचार गरेका छौं । अर्को हाम्रो यहाँको स्वास्थ्य केन्द्रबाट जे जति औषधिहरु उपलव्ध भइरहन्छन् हामीले ३० थरिका औषधि भन्दा अन्य औषधिहरु यहाँका स्थानीय स्वास्थ्य चौकीबाट उपलव्ध गराउन सकिदैन । ती बाहेकका अतिरिक्त औषधिहरु वृद्धहरुलाई औषधि उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो ८० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरु जो जो हुनुहुन्छ । उहाँहरु कोही सुगरले ग्रसित हुनुहुन्छ । कोही उच्च रक्तचापले ग्रसित हुनुहुन्छ ती विरामीहरुले प्रयोग गर्ने औषधि भनेको हाम्रो ३० वटाभित्र पर्दैन । हामीले एउटा अलग्गै कार्यविधि बनाएर सबैलाई गर्न नसके पनि कम्तीमा जेष्ठ नागरिकहरुलाई उपचार गर्नुपर्छ भन्ने हिसावले हामीले अन्यत्रका डक्टरहरुले सिफारिस गरेका औषधिहरु हामीले यताबाट उपलव्ध गराएर उहाँहरुलाई घरमै जाने चेकजाँच गर्ने र औषधि पनि घरमै गएर उपलव्ध गराउने गरिरहेका छौं । त्यो गरे वापत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पनि दुरीका आधारमा उहाँहरुलाई इन्सेटिभ पनि दिने गरिरहेका छौं ।
यो त भयो उपचारात्मक कुराहरु अन्य स्वास्थ्य प्रवद्र्धनात्मक तथा प्रतिरोधात्मक सम्वन्धी क्रियाकलापहरुमा के कस्तो सहयोग पु¥याइरहेको छ ?
यसमा के छ भने जति पनि हामीले जनचेतनाका क्रियाकलापहरु बाल मृत्युदर कसरी घटाउने, मातृ मृत्युदर कसरी घटाउने भन्ने विषयमा हामीले चेतनामूलक कार्यक्रमहरु त नियमित भइरहेका छन् । हामीले यो गर्नका लागि कम्तीमा पनि सबै विकास निर्माण होस्, स्वास्थ्य होस्, अन्य सेक्टरमा होस् । हामी शिक्षित हुनुपर्दछ । शिक्षित भएपछि मात्र उहाँहरुले अटोमेटिक यो बुभ्mनुहुन्छ भनेर हाम्रो पहिलो प्राथमिकता खानेपानी पश्चात् शिक्षालाई दिएका छौं । शिक्षामा गतसाल र यो साल लगानी गरिरहेका छौं । जनता शिक्षित हुनुभयो भने स्वास्थ्य चेतनासम्वन्धी कुरामा सुधार आउँछ भन्ने हिसावले हामीले काम अगाडि बढाइराखेका छौं ।
नेपाल सरकारले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएको छ, यसको प्रभाव कस्तो छ ?
स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम लागू भएको जानकारी हामीले गाउँपालिकाका सबै वडाहरुबाट जानकारी गराएका छौं । कतिपयले गर्नु पनि भएको छ । तर स्वास्थ्य विमाको कुरा गर्दै गर्दा स्वास्थ्य विमा गराउने दर बढ्न सकिराखेको छैन । किनभने जिल्ला अस्पताल होस् या जिल्ला भन्दा बाहिर होस् स्वास्थ्य विमा गराएका विरामीहरुलाई त्यहाँको स्वास्थ्य संस्थाले हेर्ने दृष्टिकोण फरक पाइयो भन्ने हामीलाई धेरै गुनासो आइरहेको छ ।
जस्तो कस्तो खालको फरक ?
फरक भन्नाले धेरै ठूलो लाइनमा बस्नुपर्ने, डाक्टरहरुले समयमै चेकजाँच नगर्ने, यो त विमा हो भन्ने हिसावले हामीलाई लाइनमै पछाडि बसाल्ने, विमा गर्नेलाई अवेरा गरिदिने । यहाँ हुन्न भनिदिने, अनि पछि रेफरल गरिदिने । जस्तो यहाँको एउटा विरामी टिचिङ हस्पिटलबाट चेकजाच गरिराथ्यो भने हामीलाई त्यहाँको लागि मात्र रेफर गरिदिनुहोस् भन्दा पनि ३ चार घण्टा लाइन बस्नुपर्ने जस्ता कारणले स्वास्थ्य विमा प्रति आकर्षण बढ्न सकेको छैन ।
गाउँपालिका भित्रका शिक्षण संस्थाहरुबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि गाउँपालिकाले के कस्ता तरिकाहरु अपनाएको छ ?
ऐरावती गाउँपालिकाको केन्द्रमा मोति उच्च मावि छ । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि मोति माविबाट शुरु गरौं भनेर गाउँपालिकाभित्रका सबै शिक्षकहरुलाई पहिलो वर्ष अंग्रेजी र नेपालीको २÷२ दिनको तालिम दियौं । उहाँहरुको पुनर्ताजगीका लागि । अहिले हामीले गणित र कम्प्युटरको आर्ट फाउण्डेशन महाविर पुन दाइसँग समन्वय गरेका थियौं । उहाँले दुई जना स्वयमसेक निशुल्क पठाइदिनुभयो । उहाँमार्फत एक हप्ता शिक्षकहरुलाई दाङवाङ मावि र मोति मावि बरौलामा सेन्टर बनाएर हामीले एक एक हप्ताको तालिम दियौं । प्रत्येक सामुदायिक विद्यालय जुन जुन विद्यालयमा कम्प्युटरहरु छैनन् । प्रिन्टर छैनन्, ती प्रत्येक विद्यालयहरुमा गतसाल हामीहरुले ३६ वटा विद्यालयहरुमा हामीले विद्युत जडान पनि ग¥यौ र ती सबै विद्यालयहरुमा कम्प्युटर पनि उपलव्ध गरायौं । बीच बीचमा शिक्षकहरुले उहाँहरुसँग समन्वय गरेर उहाँहरुलाई चाहिएको अनुरुपको तालिमको व्यवस्था हामीले मिलाएका छौं र मिलाउँदै जाने पनि छौं भन्ने प्रतिवद्धता जाहेर पनि गरेका थियौं । मोति मावि बरौलामा हामीले भेन्टिङ्ग मेशिनद्वारा सेनिटरी प्याडहरु हामीले त्यहाँ उपलव्ध गराएका छौं ।
यो सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने मेशिनको नियमित खर्चको व्यवस्थापन कसले गरेको छ ?
यसको खर्च व्यवस्थापन गाउँपालिकाले गरेको छ । यसको लगभग ८७ हजारमा हामीले मेशिन लिएको हो । यो मेशिन कत्तिको बलियो छ । यो ठिक छ कि छैन भनेर नमुनाको रुपमा मात्रै यो मेशिन जडान गरेका छौं । अन्य सबै आधारभूत माविहरुमा निशुल्क प्याडहरु हामीले वितरण गर्दै आइरहेका छौं । यो मेशिन परीक्षणपछि राम्रो देखिएमा सबै विद्यालयमा भेण्टिङ मेशिन जडान गर्ने योजनामा छौं ।
शिक्षण संस्थाकै कुरा गर्दाखेरी गाउँपालिका तहमा हालसम्म पनि एउटा पनि क्याम्पस रहेनछ । यसको लागि गाउँपालिकाले केही योजना बनाएको छ ?
हाम्रो ऐरावती गाउँपालिकामा एउटा उच्च तहको क्याम्पस छैन । त्यसका लागि हामीले गाउँसभाबाट प्रक्रिया निर्णय पनि गरेर अगाडि बढाइसकेका छौं । त्यसको लागि न्युनतम पनि भौतिक पूर्वाधारहरु हुनुपर्ने र नियमित त्यो उच्च शिक्षा हासिल गर्नुको सट्टा अलिकति हामीले प्राइभेट लाइनतिर जोड गर्ने हो कि भनेर अहिले बाट हाम्रो मोति मावि बरौलामा आई टी कलास सञ्चालन भइराखेको छ । हामीले प्राविधिक धार तर्फ जोड गर्ने हो कि भनेर हामीले लागिरहेका छौं । आउने दिनहरुमा गाउँपालिका भित्र क्याम्पस सञ्चालन गर्न प्रदेश तथा संघ सरकारमा हामीले त्यसको अनुरोध पत्र पनि पठाएका छौं । आशा गरौं उहाँबाट केही न केही जवाफ छिट्टै आउने छ । किनकि अझै सम्म पनि संघीय शिक्षा ऐन नवनिसकेको अवस्था त्यसले गर्दाखेरी पनि कहि अप्ठेरो परेको हो कि भन्ने महसुस गरिराखेका छौं ।
ऐरावती गाउँपालिकाको भूवनोट हेर्दा खेरी अलि बढि खानेपानीको समस्या भएको जस्तो देखिन्छ । खानेपानीको सहज आपूर्तिको लागि गाउँपालिकाले के कस्तो रणनीति अपनाएको छ ?
यो हाम्रो ऐरावती गाउँपालिकामा पहिलेको तुलनामा यो दुई वर्षको अवधिमा हाम्रा ८० प्रतिशत पानीका मुहानहरु सुकिसकेको अवस्था छ । हाम्रो सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको पानीको समस्या हो । मान्छे गरीव भए पनि धनी भए पनि शिक्षित भए पनि अशिक्षित भए पनि पानीलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा छानिरहेको हो । त्यो भएर अहिले हामीले खानेपानीको विजुलीको लिप्mट खानेपानी भरे गतसाल नै हामीले यो योजनालाई गतसाल नै बजेट छुट्याएका थियौं ७० लाख । विभिन्न प्राविधिक समस्याका कारण त्यहाँको डिपिआर रिपोर्ट तयार पार्दै गर्दा, त्यहाँको टेण्डर हामीले टेण्डर खोलाइसकेपछि फेरि त्यो टेण्डरमा कसैको परेन । रि टेण्डर गर्दा हाम्रो प्रदेशबाट जुन म्याचिङ्ग फण्ड ७० लाख आएको थियो । त्यो हाम्रो कोल्याप्स भएको अवस्था हो । अहिले हामीले फेरि त्यसलाई पुन टेण्डर भैसकेको छ । र अहिले हामीले त्यो ठूलो योजनामध्ये त्यसलाई गाउँपालिकाबाट गत सालको ७० लाख र यो सालको एक करोड ३० लाख गराएर दुई करोड रुपैया हामीले त्यसमा विनियोजन गरका छौं । त्यसको टोटल स्टीमेट २ करोड ६५ लाख रुपैया विनियोजन गरेका छौं । त्यसको जम्मा स्टिमेट लागत भनेको २ करोड ६५ लाख र ६५ लाख र यो फस्ट पिरियडमा दुई करोडको काम सम्पन्न गरेपछि हिउँदे अधिवेशनमा हामीले बजेट थपेर भएपनि यो योजना सम्पन्न गर्ने भनेका छौं ।
यसले कति परिवारलाई लाभान्वित गर्दछ ।
यसले विजुलीका लगभग ३५० घरधुरी हरुलाई खानेपानी उपलव्ध गराउँछ । साविक विजुली ऐरावती गा.पा. वडा नंं ६ । यसले गर्दा हाम्रो दाङवाङ लिप्mट खानेपानी योजना त्यसको पनि हमीले डिपीआर तयार पारिसकेका छौं ।
ग्रयाभेटी फलो टाइपका खानेपानी योजनाहरुको अवस्था कस्तो छ ?
ग्रयाभेटी फलो केही मात्रामा छन् । पहिले त पुरै ग्याभेटी फलो योजनाहरु र कुवाबाट पानी प्रयोग गरिरहेका थियौं । खानेपानीको मुहान सुक्न थालेपछि ग्रयाभेटी फलोमा खानेपानीका मुहान सुक्न थालेपछि समस्या आउन थालेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दाखेरी पनि होला । हामीले यहाँ जतिपनि बाटा खनेका छौं ती बाटाहरुमा बृक्षारोपण गर्ने, बाटोलाई स्तरोन्नती गर्ने, बाटो खन्दा निस्किएको माटोलाई व्यवस्थापन गर्ने । गतसाल मात्र हामीले ४० हजार विरुवा बाटो खनेर माटो फालेका ठाउँ र खाली जग्गामा लगाएका छौं । यो साल पनि हामीले पानीका मुहान सुकिरहेकोले गर्दाखेरी हामीले ऐरावती गाउँपालिकामा ५२ वटा रिचार्ज पोखरी निर्माण गरेका छौं । कम्तीमा पनि एउटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले एउटा रिचार्ज पोखरी निर्माण गर्नुपर्छ भनेर रिचार्ज पोखरी निर्माण गरेका छौं । तर यस वर्ष बर्षाद कम भएकोले ती रिचार्ज पोखरीमा २० प्रतिशत पनि अहिले पानी छैन । किन भने पानी नै परेको छैन । अर्को वर्ष थप ५२ वटा पोखरी निर्माण गर्ने कि, वृक्षारोपण गर्ने कि भन्ने योजना त बनाइरहेका छौं ।
खानेपानीको समस्या समाधानको लागि कस्तो योजना बनाइ राख्नुभएको छ ?
हामीले मुख्य गरेर ४ वटा लिफ्ट योजनाहरु छन् । ती लिफ्ट योजनाहरु सम्पन्न भए भने लगभग ९० प्रतिशत खानेपानी सुविधा पूर्ण हुन्छ । तर त्यो गर्नलाई यो गाउँपालिकाको केन्द्र बरौला छ । बरौलाको साविकको ९ नं. वार्डमा पनि हामीले लिफ्टबाट खानेपानी सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर योजना बनाइरहेका छौं किनभने त्यहाँ सुख्खा सिजनमा पूर्णरुपमा २ महिना पानी हुँदैन, त्यहाँका मुहानहरु सुकेर । त्यही भएर आगामी दिनहरुमा जनघनत्व पनि बढ्ने छ । बजारीकरण व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्ने हुन्छ । एक घर एक धाराको अवधारणा अगाडि बढाउँदाखेरी लिफ्ट योजना नल्याइकन सुखै छैन । तर आउने २०÷५० वर्षपछि यही लिफ्ट पनि सञ्चालन गर्नै नसकिने अवस्था पनि हुन सक्छ कि भन्ने हामीलाई महसुस पनि भइरहेको छ । किनभने जुन स्पिडमा पानीका मुहानहरु सुकिरहेका छन् । त्यो स्पीडले गर्दाखेरी त्यो समस्या आउन सक्छ । ऐरावती मात्र नभएर जिल्लैभरी देशै भरी विशेष गरेर पहाडी बस्तीहरुमा त्यो समस्या आउन सक्छ ।
त्यो गाउँपालिकाको मुख्य आर्थिक श्रोत देखिन्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न के कस्ता योजनाहरु अगाडि बढाउनुभएको छ ?
कृषिको लागि हामीले सबैभन्दा पहिले आधुनीकीकरण गरेर जानुपर्दछ, जग्गालाई पलटिङ्ग गरेर उत्पादनशिल बनाउनुपर्दछ । जस्तो ४ जना व्यक्ति छन् भने हामीले अलग अलग उत्पादन नगरौं । सामुहिक खेती प्रणाली गरौं भनेर हामीले अभिमुखीकरण गरिराखेका छौं । उन्नत विउविजन वितरण तथा उत्पादन स्थानीय स्तरमा गर्ने गरिरहेका छौं । यहाँबाट अहिले गहुँको विउ बाहिर निर्यात गर्ने अवस्थामा छौ हामी । अन्य सबै बस्तु हामीले बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । अहिले हामीले गाउँपालिका र प्रदेशको साझेदारीमा सामुहिक खेती भनेर एकै ठाउँमा हामीले ५० वटा टनेलमा टमाटर लगायत सागसव्जी उत्पादन गर्ने भनेर थाक्रेखोला कृषि सहकारी समूहमा आवद्ध भएका कृषकहरुमा एक्कै ठाउँमा हामीले टमाटर र अन्य सागसव्जी उत्पादन गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौं । त्यसको नजिकै हामीले कृषि संकलन केन्द्र पनि निर्माण कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको छ । किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपजहरु संकलन केन्द्रमा राख्ने र एउटा सुनागाभा सहकारी संस्था छ । सहकारी मार्फत हप्ताको शनिवार हाट बजार पनि सञ्चालन गरिराखेका छौं । कृषकहरुले त्यहाँ हाटवजारमा ल्याउँदा आउने जाने हुने खर्चको पनि गाउँपालिकाले अलग्गै व्यवस्था गर्ने गरिरहेका छौं । आउने दिनहरुमा तरकारी खेती र बाख्रा पालनमा अलिकति धेरै जोड दिएर जस्तो ५० वटा बाख्रा छन् भने खोर निर्माणको लागि ५० हजार रुपैया अनुदान भनेर अहिले हामीले १५÷१६ जनालाई हामीले त्यस्तो अनुदान पनि दिइसकेका छौं । हाम्रो ऐरावती गाउँपालिकाको सबै वार्डमा हामीले कृषि समूहहरु गठन गरेर त्यसलाई प्रक्रियागत ढंगले व्यवस्थित गर्ने र ती समूहहरुलाई कम्तीमा पनि एक वडा एक उत्पादनको अवधारणा लिएर हामी अगाडि बढेका छौं क्षेत्र विशेषका आधारमा उत्पादन क्षेत्र बनाउँदै छौं । अहिलेसम्म हाम्रो गाउँपालिका मासुमा स्वनिर्भर छ ।
लघु उद्यमको क्षेत्रको अवस्था के छ ?
लघु उद्यमको लागि हामीले अहिले जग्गा पहिचान गर्ने अवस्थामा छौं । लघु उद्यमलाई बढावा दिने उद्देश्यले हामीले ग्राम उद्योगको अवधारणा लिएर हामीले अहिले ८० लाख रुपैया बजेट विनियोजन पनि गरेका छौं । त्यसमा हामीले कम्तीमा पनि पलाष्टिकबाट पोलुसन फैलियो भनेर पलाष्टिकलाई प्रतिवन्ध गर्नुभन्दा पहिले पलाष्टिकको विकल्प पनि दिनसक्नुपर्छ भनेर सालको पातको दुना, टपरी बनाउने भनेर हामीले मेशिन पनि हामीले ल्याइसकेका छौं । हाम्रो यस क्षेत्रमा अलि धेरै चिउरी उत्पादन हुने भएकोले चिउरीको विजुलाबाट हामीले सावुन उत्पादन गर्ने भनेर त्यो कन्सेप्ट पनि ल्याएका छौं । हामीले बिस्तारै डलहरु, दालमोटहरु, सिलाइकटाइको लागि हामी जग्गा छनौटको प्रक्रियामा छौं । बजेट विनियोजन गरिसकेका छौं । अन्य घरेलु उत्पादनलाई वढावा दिनलाई यहाँका वासिन्दाले थोरै खर्चमा आत्मनिर्भर हुने खालको उद्योग चलाउन सक्नुहुन्छ भनेर हामीले छनौट गर्ने प्रक्रियामा छौं ।
बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुका लागि गाउँपालिकाले केही कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएको छ ?
जो युवाहरु बैदेशिक रोजगारीका लागि गइसक्नुभएको छ र केही शीप सिकेर आउनुभएको छ भने उहाँको त्यो अनुभवको आधारमा हामीले अनुदानको व्यवस्था गरिदिने र अनुदानको व्यवस्था गरेवापत उहाँले के गर्नसक्नुहुन्छ ? अनुदानको रुपमा मात्रै नभएर साच्चै भन्दा उहाँहरुले त्यो अनुदानको रुपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो टेक्निक उहाँहरुलाई थाह छ । नयाँ प्रविधि उहाँहरुले भित्राउन सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामीले पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने र जस्तै हामीले मुख्य मन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम पनि हाम्रो गाउँपालिकामा लागू भएको छ । त्यो कार्यक्रममार्फत हामीले थुप्रै त्यस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ । मैले प्रत्येक युवाहरुलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने यदि उहाँहरुमा त्यस्तो अनुभव छ विदेशमा त्यस्तो कुनै नयाँ चिज सिकेर आउनुभएको छ । त्यहाँको प्रविधिहरु यहाँ भित्राउनुभएको छ । त्यो प्रविधिमा गाउँपालिकाबाट के सहयोग गरेपछि त्यो प्रविधिलाई स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ । त्यहाँको प्रविधिलाई भित्राउन गाउँपालिकासँग समन्वय गर्नुभयो भने उहाँहरुलाई हामीले सक्दो सहयोग गर्ने छौं । आर्थिक रुपमा होस् वा प्राविधिक रुपमा या अन्य कुनै सहयोग हामी सहयोग गर्न तयार छौं ।
यो त भयो विदेश पुगेर फर्किएका युवाहरुलाई सहयोग पु¥याउने कार्यक्रम विदेश जाने तरखर गरेका युवाहरुलाई दक्ष बनाउने यहाँहरुको केही कार्यक्रम छ ?
उहाँहरुका लागि हामीले समय समयमा चेतनामूलक कक्षाहरु सञ्चालन गर्ने कन्सेप्ट पनि बनाइरहेका छौं । यदि तपाइहरु बैदेशिक रोजगारीका लागि जानुुहुन्छ भने कुन शिप सिकेर जादै हुनुहुन्छ ? तपाइहरुले यहाँ के गर्न खोज्नुहुन्छ । यहाँ उहाँहरुले ल्याएको बैदेशिक रोजगारमा जाने भन्ने अलिकति युवाहरुमा पनि के छ भने धेरै जसो ठगिनुको कारण उहाँहरु पूर्ण रुपमा ओरिण्टेड हुनुहुन्न बैदेशिक रोजगारमा जानुभन्दा पहिले । एउटाले एउटा कुरा सुनाउँछ । अर्कोले अर्को कुरा सुनाउँछ । युवाहरुको दिमाग नै जिक ज्याक बनाइदिने अवस्था पनि छ । हामीले के भन्छौ भने विदेश जानुभन्दा पहिले कुनै शीप सिकेर जान पर्छ । तपाइहरुलाई कुन शीप आवश्यक छ ? भनेर हामीले त्यो शीपमूलक तालिमहरु हामीले सञ्चालन गर्ने गरेका छौं । गत साल पनि त्यस्ता तालिमहरु हामीले सञ्चालन गर्ने गरेका छौं । यो वर्ष हामीले युवाहरुसँग वार्डबाट उहाँहरुको आप्mनो योग्यता अनुरुप उहाँहरुले गर्न सक्ने शिप बारे तालिम सञ्चालन गर्दै छौं । यसका लागि युवाहरुले वार्डबाट गाउँपालिकामा प्रस्ताव पेश गर्न पनि आह्वान पनि गर्दछुँ ।
अहिलेसम्म सबै बस्तीहरुमा विद्युत नपुगेको अवस्था छ । यसलाई पूरा गर्ने केही योजना छ ?
विद्युतीकरणको सवालको सन्दर्भमा यहाँलाई सबभन्दा पहिले मैले जानकारी गराउँ हाम्रो गाउँपालिका ६ वटै वार्डहरु झिम्रुक जलविद्युत केन्द्र प्रभावित क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको छ । हाम्रो ६ वटा मात्र नभएर जस्तो अर्घाखाँचीको खिल्जी, असुरकोट, नयाँ गाउँ र खैरा । बुटवल पावर कम्पनीले जो प्रत्येक घरमा विद्युतीकरण गर्ने भन्ने उहाँहरुको प्रतिवद्धता र संझौता पनि छ । त्यो भएको हुनाले अहिले बुटवल पावर कम्पनीले गरेको सम्झौता र प्रतिवद्धता अनुरुप पूर्ण रुपमा यहाँ पालना नभइसकेपछिको अवस्था पनि छ । कम्तीमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा अझै हाम्रो विद्युत नवालेको अवस्था छ । शुरुबाट देखि अहिलेसम्म आजको एक हप्ता अघिसम्म अघिल्लो सोमवार मात्रै म बुटवल पावर कम्पनीको हेडक्वाटर काठमाण्डौ त्यहाँको प्रवन्धक प्रकाश श्रेष्ठ सँग मैले यहाँको सम्पूर्ण विद्युतसँग सम्वन्धित समस्या राखेर आएको छुँ । आजभन्दा पहिला क्षेत्र विकास समितिमार्फत उहाँले जति पनि हाम्रो डाउनस्ट्रि प्रभावित क्षेत्र गर्ने भनेर सम्झौता भएको थियो त्यो सम्झौताहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएको र ती कार्यान्वयन अरु गर्दै गर्दा हामीलाई सबैभन्दा समस्या भनेको खानेपानीमा छ । त्यो खानेपानीको समस्या उहाँहरुले समाधान गरिदिने भन्ने सम्झौता हुँदाहुँदै पनि खानेपानीको समस्या उहाँहरुले समाधान नगरे पनि अव लिफ्ट प्रविधिका योजनाहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकोले हामीले निर्माण गर्न लागेका योजनाहरुमा कम्तीमा पनि विद्युतीकरण गरिदिन प¥यो । हाम्रो प्रभावित क्षेत्र भित्रमा लोकल लाइन विस्तार गरिदिनुप¥यो । हामीलाई दारिमचौरबाट माथि दम्ती सव स्टेशन, सव स्टेशनबाट यता चाहिएन कि हामीलाई दारिमचौरबाट लोकल लाइन त्यसको फिडरमार्फत हाम्रो पालिकामा दिनुप¥यो भन्ने हाम्रो मुख्य रुपमा २ वटा माग छन् । सँगै सँगै हाम्रो कतिपय ठाउँमा पंखा पनि नचलेको अवस्था छ । त्यहाँको भोल्टेज तथा लाइन अपग्रेड गर्नुप¥यो ।
गरीवीमा पिल्सिएकाहरुलाई के कस्ता कार्यक्रमहरु गाउँपालिकाले अगाडि बढाएको छ ?
त्यस वर्गमा परेका किसानहरुले व्यवसाय गर्न चाहेमा कार्यालयको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने गरी व्यवसाय गर्न अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छौं । यो अनुदानबाट उनीहरुले बाख्रापालन, स्थानीय कुखुरा पालन, भैसीपालन व्यवसाय गर्न सक्छन् । त्यस्तै घरेलु उद्योग, कुटिर उद्योग उहाँहरुले सञ्चालन गर्न खोज्नुहुन्छ भने त्यसको लागि सहयोग गर्ने गरेका छौं । मुख्यमन्त्री ग्रामीण कृषि कार्यक्रम मार्फत हामीले अत्यन्त गरीवहरुलाई उपचार खर्च उपलव्ध गराइराखेका छौं । विपन्न बालबालिकाहरुलाई छात्रवृत्ति, प्रत्येक बालबालिकालाई ५ हजार रुपैया बरावरको चामल उपलव्ध गराएका छौं ।
भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले गरे भेटवार्ता
गलफ्रेन्ड’सँग भेट्न छुट्टै कोठा